Waxaan horeyba uheysanay taariikh rasmi ah oo loogu talagalay WWDC 2021. Waxay noqon doontaa Juun | Waxaan ka socdaa mac
Waxaan horey uheysanay taariikh rasmi ah oo loogu talagalay WWDC 2021. Waxay noqon doontaa bisha Juun
Apple ayaa leh lagu dhawaaqay si rasmi ah WWDC sanadka 2021-ka oo halheys u ah "Iftiim oo bal fiiri". Sannadkan, shirku wuxuu socon doonaa 7 Juun ilaa 11 Juun. WWDC 2021, Apple waxay u badan tahay inuu soo bandhigo mustaqbalka barnaamijyadiisa software, oo ay ku jiraan iOS 15, macOS 12, watchOS 8, iyo inbadan. Waxay noqon doontaa sanadkii labaad oo isku xigta in Apple ay martigalin doonto shir caalami ah oo horumarineed oo caalami ah sababo la xiriira cudurka faafa ee COVID-19.
Sannadkii labaad oo isku xigta, Apple wuxuu qaban doonaa WWDC si muuqata wuxuuna horeyba u dhigay taariikh. Waxa ku xigi doona 7-ta Juun. Sanadkii la soo dhaafay, WWDC dalwaddii ayaa si ballaaran loogu ammaanay inay gacan ka geysatay sidii shirkii looga dhigi lahaa mid loo wada dhan yahay, gaar ahaan marka la eego kharashka sida caadiga ah la xiriira safarka San Jose, Kaliforniya, shirka. Tim Cook wuxuu cadeeyay in WWDC 2020 ay soo jiidatay 22 milyan oo daawadayaal dhamaan baahinta Apple. Wuxuu awooday inuu ururiyo 72 saacadood oo ah muuqaalka fiidiyowga horumariyaha ah isla markaana uu dayactiray 4.500 shaybaar qof-qof ah
Baarka daabacaddan cusub waa mid aad u sarreeya, laakiin haddii uu jiro qof awood u leh inuu dhaafo, taasi shaki la’aan Apple lafteeda ayaa ah. Dhab ahaan, shirkadda ayaa ku dhawaaqday WWDC ee sanadkan sida soo socota:
Shirka horumarinta adduunka ee Apple wuxuu imanayaa shaashad kuu dhow, Juun 7-11. Ku soo biir bulshada wax soosaarayaasha ee adduunka barnaamij buuxa oo khadka tooska ah leh ogeysiisyo xiiso leh, fadhiyo, iyo sheybaarro aan kharash dheeraad ah lagu darin. Waxaad arki doontaa barnaamijyadii ugu dambeeyay ee Apple, aaladaha, iyo teknolojiyada markii ugu horreysay, sidaa darteed waad awoodi kartaa Abuur barnaamijyadiinna ugu casrisan iyo cayaaraha ilaa maanta.
Way bixin doontaa aragti gaar ah mustaqbalka iOS, iPadOS, macOS, watchOS iyo tvOS ». Susan Prescott, madaxweyne ku xigeenka Apple ee xiriirka horumarinta, waxay ku dartay waxyaabaha soo socda war-saxaafadeed:
“Waxaan jecel nahay inaan sanad walba isku keenno horumariyaasheena WWDC si aan wax uga barto teknoolojiyadeena ugu dambeysa uguna xirno injineerada Apple. Waxaan ka shaqeyneynaa inaan ka dhigno WWDC 21 kan noogu weyn uguna wanaagsan taariikhda, waana ku faraxsanahay inaan u fidino kuwa horumariya Apple qalab cusub oo lagu taageerayo maaddaama ay abuurayaan barnaamijyo beddelaya habka aan u nool nahay, u shaqeyno iyo sida aan u ciyaareyno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Waxaan horey uheysanay taariikh rasmi ah oo loogu talagalay WWDC 2021. Waxay noqon doontaa bisha Juun
Shaqaalaha Apple waxay bixiyeen fasax si ay u helaan talaal
Nate Mann wuxuu ku biirayaa jilayaasha Masters-ka hawada